1. 'Bitcoin', नयाँ संसारको डिजिटल मुद्रा कस्तो प्रकारको लगानीले सबैभन्दा बढी फाइदा लिनेछ! यदि धेरै दशक पहिले कसैले तपाईंलाई भन्छ कि त्यहाँ कुनै पनि सरकारी एजेन्सीको स्वतन्त्र मुद्रा हुनेछ। तर सबै को उपयोग मा लोकप्रिय हुनेछ जससँग बैंक भुक्तानी भन्दा कम भुक्तानी शुल्कहरू छन् तपाईं हाँस्नुहुनेछ र विश्वास गर्नुहुन्न। तर आज यो प्रमाणित छ कि तपाईं केहि पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो आश्चर्यजनक तरिकाले पैसाको फारामसँग 'Bitcoin' भनेर चिनिन्छ। Bitcoin Bitcoin के हो? Bitcoin एक डिजिटल मुद्रा हो। यो कम्प्युटरले बनाएको हो। कुन अमूर्त पैसा हो हामीसँग नोटको रूपमा वा एउटा सिक्का जस्तो हेर्नको लागि त्यहाँ कुनै आकार छैन। यो एक गैर-केन्द्रित प्रणाली हो। त्यहाँ कोही पनि मालिक छैनन्। तर पियर-टु-पियर भुक्तान प्रणालीको साथ अनलाइन किनमेल गर्न नगदको सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो पैसा भनिन्छ "क्रिप्टोकरन्सी"
2. पैसा हुनको लागि, वालेट हुनुपर्दछ, त्यो पैसा हो यदि तपाईं पैसा चाहानुहुन्छ भने तपाईंले राम्रो वालेट खोज्नु पर्छ, जसमा बैंक खातासँग समान प्रकार्य हुनेछ। हामी बिटकोइन्सहरू स्टोर गर्न अघि हामी तिनीहरूलाई खर्च गर्नु अघि। त्यहाँ वालेटको धेरै फरक प्लेटफार्महरू छन् - Coinbase वालेट एक वालेट हो जुन स्मार्टफोनको स्क्रिनमा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। यसले दुबै आईओएस र एन्ड्रोइन्डलाई बैंक खाता बाइन्डि supportको साथ समर्थन गर्दछ। साथै, बिटकॉइन एक्सचेन्ज सेवा वास्तविक पैसाको रूपमा बाहिर आउँदछ र पैसाको लागि बीमा प्रस्ताव गर्दछ - माइसेलियम स्मार्टफोनमा सबैभन्दा लोकप्रिय वालेट अनुप्रयोग हो। यसले नयाँ टेक्नोलोजीहरू जस्तै ट्रेजर, टोर र बिटकॉइन भण्डारण हार्डवेयरलाई पनि समर्थन गर्न सक्दछ। - इलेक्ट्रोम यो वालेट एक प्रोग्राम हो जुन कम्प्युटरमा प्रयोग गरिन्छ। एक उत्कृष्ट सुरक्षा ईन्क्रिप्शन प्रणालीको साथ आउँदछ। धेरै बिटकोइन्स राम्रोसँग राख्न
3. Bitcoin कसरी प्राप्त गर्ने
4. शुरुआतीहरूको लागि तार निःशुल्क भाग्य को धेरै छैन, एक विश्वसनीय सस्ता वेबसाइट बाट नि: शुल्क बिटकइन प्राप्त गर्न सक्षम। कुन होसियारीपूर्वक जाँच गर्नु पर्छ किनभने ती मध्ये धेरैले एक अर्कालाई धोका दिनेछन् वास्तवमा वितरित गरिएको वेब यस्तो हो https://freebitco.in जुन भित्र जान र लागू गर्न र Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro वा Huobi.co.th मा कुनै पनि वेबसाइटबाट भिक्का गर्न र न्यूनतम रकममा पुग्न बिटकइन निरन्तर राख्नको लागि कुनै पनि वेबसाइटबाट हाम्रो बिटकइन ठेगाना प्राप्त गर्न सक्दछ। कहिले हाम्रो वालेटमा हस्तान्तरण गर्न सक्छ
5. लाइन ट्रेडिंग, जहाँ हामी बाटबाट बिटकइन खरीद गर्नेछौं, हामी यसलाई थाइल्याण्डमा गर्छौं, उनीहरूको वेबसाइट, Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro वा Huobi.co.th ले हामीलाई परिचय प्रमाणीकरणको लागि आवेदन दिन अनुमति दिनेछ, baht हस्तान्तरण हामीसँग आबद्ध गर्न एक ट्रेडरबाट खाता र खरीद गर्नुहोस् bitcoin। यो निर्भर गर्दछ कि तपाईं धेरै वर्षको लागि पैसा राख्न रुचाउनुहुन्छ, वा तपाईं Bitcoin व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ र साथै भाटमा पनि व्यापार गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यहाँ एक जोखिम पनि छ। किनभने क्रिप्टो बजार सबै समय खुला छ।
6. Bitcoin को अनौंठो र रमाईलो बिट यो हो कि यसलाई डिजिटल फर्ममा सुनको रूपमा खानी गर्न सकिन्छ। किनकि यो कूल २१ मिलियनको लागि डिजाइन गरिएको हो, त्यहाँ धेरै हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले खनन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। हार्डवेयर उपकरणको साथ खन्नु हो जुन यो खुदाई अनलाइन किन्न सकिन्छ केवल यसलाई सेट अप गर्नुहोस्, यसलाई प्लग इन गर्नुहोस्, तपाईंको बिल तिर्नुहोस् र यसलाई छोड्नुहोस्। यसले हाम्रो लागि डिजिटल सिक्का खन्नेछ।
7. Bitcoin मा लगानी गर्ने हरेक विधि फरक छ। कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो त्यो न्याय गर्न सक्षम नहुन सक्छ तर मुद्रा जोडीको विवरण र चलनहरू निरन्तर सिक्नु महत्त्वपूर्ण छ। सीमित समयको लागि लाभलाई सही सम्झौता गर्न मद्दतको लागि। र तपाइँको लागि सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्नुहोस्